A Voz da Zueira - O Melhor 4.914 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.914 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား A Voz da Zueira - O Melhor
A Voz da Zueira - O Melhor ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖိလစ်ပီ၏စကားသံအဘို့အ Added သက်ရောက်မှု!
Baixaki မှ app ကိုပြန်သုံးသပ်ပါ! http://www.baixaki.com.br/android/download/a-voz-da-zueira.htm
Voice ကို Felipe, Manuel, Amalia, Loquendo, zueira, Poladoful နှင့်ပိုပြီး!
ပေါ့ပါးမြန်ဆန် app ကို!
လူအတော်များများဟာသင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဒီဖြစ်ပျက်, app ကိုစကားလုံးမပြောမမြည်တမ်းခြင်းနေကြသည်။ စကားသံကို google အသိအမှတ်ပြု၏အလွန်အင်္ဂါရပ်မနှင့်စကားလုံးအရပျ၌ ***** နှင့်အတူကဖြည်။ သငျသညျကိုရေးလျှင်မူကား, ကအလုပ်လုပ်တယ်, =)
**** အသုံးပြုနေသည်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! ****
သင်တစ်ဦးယူကျု့ချန်နယ်ရှိသည်နှင့် app ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကကျနော်တို့တဦးတည်းရှိ likes ပေးနိုင်အောင် ****, သင့်ရုပ်သံလိုင်း၏နာမတော်ကိုစွန့်ခွာ! ****
**** မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များကိုချန်ထားပါ! ****
zueira ၏ The Voice သငျသညျပိုမြန် Google Play ကို Google Voice ကို Translator (ဖိလိပ္ပု၏အသံမြည်ခြင်း, ဘာသာပြန်ဆိုသူရဲ့အသံ, ဇာတ်ကြောင်းပြောရဲ့အသံကို) နဲ့စာသားကိုကနေအသံ generate ခွင့်ပြုထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ အသံ ဖန်တီး. သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေ!
ဒီ app ဖိလိပ္ပု, jabiraca Jabiroco ၏ Loquendo အသံ, Manoel (Eusebio ၏စကားသံကို) ၏စကားသံကို, တရုတ်၏စကားသံကိုအသံနဲ့အသံ၏စကားသံကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ နယူးအသံမကြာမီဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်!
သင်ကအသံနဲ့ save ဒါအော့ဖ်လိုင်းသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦး tanned ပေးနိုငျရနျ app ကိုအသုံးပြုနေသည်သောမှတ်ချက်များကြပါစို့
ဒီ app က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကိုအသုံးပြုသည်မရှိ, server ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဆာဗာ၏ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်အသုံးပြုသူကြီးထွားလာအရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့စတင်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ဘာမှမနှင့်အတူပလီကေးရှင်းများလည်ပတ်စွက်ဖက်ပါဘူးတဲ့သေးငယ်တဲ့နဖူးစည်းစာတန်းလည်းမရှိ။
ပျော်စရာရှိသည်! ကောင်းသော Zueira!
A Voz da Zueira - O Melhor အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
A Voz da Zueira - O Melhor အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
A Voz da Zueira - O Melhor အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
A Voz da Zueira - O Melhor အား အခ်က္ျပပါ
juegosone စတိုး 1 54
A Voz da Zueira - O Melhor ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း A Voz da Zueira - O Melhor အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.914
ထုတ်လုပ်သူ Bruno Piovan
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.brunopiovan.com/zueira-privacy-policy.txt
Release date: 2019-08-20 02:41:30
လက်မှတ် SHA1: 1D:92:5B:BE:49:0D:4F:CB:84:D1:DC:59:DE:83:3C:5E:CA:E2:87:09
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Bruno Piovan
အဖွဲ့အစည်း (O): Bruno Piovan
နယ်မြေ (L): S?o Paulo
A Voz da Zueira - O Melhor APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ